Umthetho weRhafu eNetherlands | Law & More
IMIMANDLA- kunye NOMTHETHO WEMITRIKI
I-MERGers & NOKUFUNDA
I-PhilANTHROPY kunye NOKUGQIBELA KWAMAZIKO
IIPARMA & NESAYENSI ZOBOMI
Irhafu eNetherlands ichaphazela wonke umntu ohlala eNetherlands. Omabini amazwe aseNetherlands kunye neYurophu (i-EU) onke aneenkqubo ezinzima zerhafu equka imigaqo enzima kunye nezivumelwano zamazwe aphesheya. Inkqubo yokuhlawula irhafu yamaDatshi, umzekelo, yazi uninzi lweentlobo ezahlukeneyo zomthetho kunye neerhafu, ezinje ngerhafu yengeniso, irhafu yomvuzo, irhafu yokuhlawulwa kunye nerhafu yomdibaniso. Ukongeza zonke ezi nkqubo zikhankanyiweyo ngaphambili, imigaqo kunye nezivumelwano zinokuba nefuthe kwinkqubo yokuhlawula irhafu yamaDatshi.
UCWANGCISO LENKCAZO YENXENYE YAMAZWE NELizwe
ZOQHAGAMSHELWANO LAW & MORE
Irhafu eNetherlands ichaphazela wonke umntu ohlala eNetherlands.
Omabini amazwe aseNetherlands kunye neYurophu (i-EU) onke aneenkqubo ezinzima zerhafu equka imigaqo enzima kunye nezivumelwano zamazwe aphesheya. Inkqubo yokuhlawula irhafu yamaDatshi, umzekelo, yazi uninzi lweentlobo ezahlukeneyo zomthetho kunye neerhafu, ezinje ngerhafu yengeniso, irhafu yomvuzo, irhafu yokuhlawulwa kunye nerhafu yomdibaniso. Ukongeza zonke ezi nkqubo zikhankanyiweyo ngaphambili, imigaqo kunye nezivumelwano zinokuba nefuthe kwinkqubo yokuhlawula irhafu yamaDatshi.
Phambi kokuqala ishishini eNetherlands wonke umrhwebi kufuneka acetyiswe ngemicimbi yerhafu yamaDatshi kunye nerhafu yamaDatshi. Kububugcisa bokusebenzisa ngokupheleleyo imigaqo yerhafu ukumisela uxinzelelo lwerhafu yamaDatshi.
Yintoni enokubakho Law & More ndiyakunceda?
Law & More Abacebisi ngerhafu banceda ukuphucula indlela efanelekileyo yokuzibandakanya ukuze banandiphe ngokupheleleyo iirhafu zamaDatshi. INetherlands ibonelela ngolawulo lwezivumelwano zerhafu eyenzelwa iinkampani zamazwe amaninzi inkxaso ngezangaphandle. Ukutshintshwa kwemveliso kwamanye amazwe kunokukhokelela kwizibonelelo zerhafu. Ukurhafiswa kabini kunokupheleliswa ngenxa yezivumelwano ezininzi zerhafu iNetherlands ingene kuyo. Iirhafu zokungenisa elizweni zamaDatshi zinokuthintelwa kwiimeko ezininzi.
Law & More, ngentsebenziswano nabacebisi bayo berhafu kunye kunye nabaxumi bayo, bajonga kukhetho olunikezelwa yimithetho yerhafu yamaDatshi kunye ne-EU. Ukuba ikho imfuneko, siza kusebenzisana nabacebisi ngerhafu abanokuthenjwa kunye nababhalisi beencwadi ababhalisiweyo eNetherlands nakwezinye iindawo ukunika iingcebiso kunye nesisombululo kubathengi bethu baseDatshi nakwamanye amazwe.
Sithanda ukucinga kokuyila kwaye sijonge ngaphaya kwemicimbi esemthethweni yemeko. Imalunga nokufikelela kwisiseko sengxaki kunye nokuyisingatha kumcimbi omiselweyo. Ngenxa yokungabikho kobukrelekrele kwengqondo yethu kunye neminyaka yamava, abathengi bethu banokuthembela kwinkxaso yomthetho yobuqu kunye efanelekileyo
Sitsalele umnxeba kule nombolo: +31 40 369 06 80 okanye thumela i-imeyile:
Mr. UTom Meevis, igqwetha kwa Law & More -Tom.meevis@lawandmore.nl